गर्भावस्थामा पेटमा काट्नुहोस्
गर्भावस्थामा धेरै महिलाहरू गर्भावस्थामा बिभिन्न चरित्र र तीव्रताको दुखाइमा लिए। गर्भावस्थाको बखत पेटको पेट वा उपन्यास दर्दको उपस्थितिको कुनै विवेकका मामिलाहरू छैनन्। जे भए पनि, यो जान्नु आवश्यक छ कि गर्भावस्थामा सबै पीडा आमा र बच्चाको लागि खतरनाक हुँदैन।
यो प्रायः काट्छ जुन काट्छ र अड्किन्छ, र कहिले काँही पेटको तनावमा कट्टरपन्थी अवस्थाको रूपमा देखा पर्दछ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा विज्ञहरूले ध्यानपूर्वक आफ्नो शरीर सुन्न र पीडाको तीव्रता निर्धारण गर्छन्, यसको उपस्थितिको आवृत्ति नियमित वा बारम्बार बित्दछ वा छिटो हुन्छ। यदि दुखाइ रोकियो भने, र थप लक्षणहरू उत्पन्न भएनन्, प्रायजसो पीडा तनावको प्रतिक्रिया थियो र तपाईंले आराम र स्विच गर्न आवश्यक छ।
नमस्कार, केटीहरू! गर्भावस्था कतै हप्तामा। । आज, करीव एक घण्टा रात, म पेटको तलको तल्लो दुखाइबाट उठ्छु (धेरै तल), मैले मेरो श्रीमान्लाई माथि उठें (उनले टिभी हेरे, केवल बोलाए, केवल कल गर्न सकेन, केवल कल गर्न उसको आँखाले पसिना छोयो, पसिना अलि थियो, ऊ कतै2मिनेट चलिरहेको थियो र जान दिनुहोस्। । यो एक अनुपयुक्त केवल कडा र2मिनेटमा दु: खको चरित्र जस्तो देखिन्छ, तब जान दिनुहोस्, मैले औषधिबाट पिउन सकेनन। । बिहान एक सानो "मुड्त्तैं पेट" पेट कुनै गाह्रो स्टूल थिएन (विवरणका लागि माफ गर्नुहोस्)। ।
योनीमा पीडाको कारण उरोआरल प्रणालीको संक्रमण हो। यस मामलामा, दुखाइको साथ, कहिलेकाहीं अप्रिय गन्धको साथ बाक्लो वेभल-मुसलयुक्त डिस्चार्जहरूको साथमा। त्यस्ता संक्रमण दुवै जनाको चिकित्सकहरू, थरथैमोसिस, हर्पेसहरू भनिन्छ। ती मध्ये केही निदान गर्न गाह्रो छ। साथै, पीडा प्रायः (कहिलेकाँही) आत्मीय सम्बन्ध पछि हुन्छ।
प्राय: जसो गर्भावस्थाको बारेमा यस्तो पीडा मात्र गर्भावस्थाको बारेमा डर र अनुभव मात्र हुन सक्दछ, जुन हो, मनोवैज्ञानिक चरित्र लगाएको।
तर हरेक भविष्य आमालाई थाहा हुनुपर्दछ: तपाईंले पीडाको तीव्रतामा ध्यान दिनु आवश्यक छ, र त्यसपछि चरित्रको लागि। तीव्र पीडाको साथ, तपाईले तुरुन्तै डाक्टरलाई परामर्श लिनु पर्छ!
शारीरिक जानकारी। गर्भवतीको शरीरमा परिवर्तनको परिणाम स्वरूप देखा पर्दछ। त्यस्ता लक्षणहरू कुनै पनि रोगहरूसँग जोडिएको छैन, एक महिला र भविष्यको बच्चाको लागि खतरनाक छैन, जुन चिकित्सकीय उपायहरू आवश्यक पर्दैन;
। विभिन्न रोगहरूको परिणाम स्वरूप उत्पन्न गर्नुहोस्। / LI> << p> धेरै अक्सर महिलाहरू प्रारम्भिक गर्भावस्थामा महिला पेटको तल दुख्छन्। त्यस्ता लक्षणहरू आदर्शको विकल्पको रूपमा हुन सक्छन् र विभिन्न रोगहरू स indicate ्केत गर्दछन्। समयमै उपचारका लागि खतरनाक संकेतहरू पत्ता लगाउन सक्षम हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
गर्भावस्थाको पहिलो त्रैमासिकमा पेटको तल दुखाइ के हो? / H2><< p> ELPOMEN को तल दुखाइको पहिलो त्रैमासिकमा स्वस्थ गर्भवती महिला हराइरहेका छन् वा विरलै असहनीय रूपमा देखा पर्दछ। कडा लक्षण वा लगातार पीडाहरू एक गर्भवती महिलालाई सम्बोधन गर्न कारण हुनुपर्दछ।
फिजलीय दुखाई - कारण र संकेतहरू
म्याटेटेन महिलाको आधा भन्दा धेरै गर्भवती महिलाको आधा भन्दा बढी गर्भवती महिलाको फेदलोजिकल दुखाइको फेदलोजिकल दुखाइमा पेटको तल। यस्तो घटनाहरूको कारणहरू:
फिजरिजिकल दिवससँग एक अनपेक्षित तान्न वा अधिक चरित्र छ, एक महिला मा विशेष असुविधा छैन, Spasmolitical वा पेन्टकिलीकारहरूको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन।
रोगलोली रोग गर्भवती र भ्रुणको लागि सधैं खतरनाक हुन्छ। त्यस्ता पीडाहरूले सहन र बेवास्ता गर्न सक्दैनन्। केवल समयमै निदान र सक्षम उपचारले सम्भावित जटिलताहरूबाट बच्न मद्दत गर्दछ।